Nhau - Kubatsira kweiyo Ceiling Grid
Tifonere: + 86-15176918352
Dombo Wool Insulation
Girazi Wool Insulation
Kubatsira kweiyo Ceiling Grid
Yakamiswa Sisitimu imhando itsva yezvivakwa zvekuvaka. Nekuvandudza kwekuvakwa kwazvino kweChina, yave ichishandiswa zvakanyanya mumahotera, zvivakwa zveumisheni, zviteshi zvevatakuri, zviteshi, nzvimbo dzemitambo, nzvimbo dzekushambadzira, mafekitori, zvivakwa zvehofisi, zvivakwa zvekare Zvivakwa zvekuvakazve, zvigadzirwa zvekushongedza zvemukati, matenga uye dzimwe nzvimbo. Simbi yesimbi (yekubheka pendi) keel ceiling ine zvakanakira uremu, kusimba zvakanyanya, kushandisika kune isina mvura, kushamiswa, guruva, kupisirwa inzwi, kunyatsozwiwa, kudziya kupisa, nezvimwewo panguva imwe chete, iyo zvakare ine zvakanakira zvekuvaka pfupi nguva nekuvakwa kuri nyore, etc. Musiyano uripo pakati pechigadziro chesimbi keel neyakavharira girini yakavhenekerwa kazhinji kesimbi keel haina pendi, uye wedenga grid rakabatanidzwa (galvanized). Ceiling grid kazhinji yakakamurwa kuva nhema uye chena.
Chaizvoizvo moto wekupisa: Iyo keel yependi inogadzirwa neyakaomeswa moto galvanized sheet, iyo inogara kwenguva refu.
Chimiro chinonzwisisika: ehupfumi yakaiswa dhizaini, yakakosha nzira yekubatanidza. Zvakanakisa kuisa uye kuchengetedza mutengo.
Chitarisiko chakanaka: Kumusoro kweiyo keel inogadzirwa neye galvanized simbi sahani, iyo inobatwa nepaka yekubheka.
Kubata kwakasiyana-siyana kwekushandisa: yakakodzera kumarestaurant, zvivakwa zvehofisi, mahotera, nzvimbo yekudyira, mabhangi nenzvimbo huru dzeveruzhinji.
1. Munguva yekuvakwa kwechimiro, iyo iripo-in-simo slabs kana yakagadziriswa masiraidhi inozosungiswa zvinoenderana nezvinodikanwa zvekugadzira, uye iyo φ6 ~ φ10 yakasimbiswa kongiri kusimbisa ichave isati yavigwa. Kana iyo dhizaini isingadikanwa, iyo yakasimbiswa simbi maboms ichave yakadzikwa zvichienderana neyakagadziriswa nzvimbo yemakuru mahombe. Kazhinji iri 900 ~ 1200mm.
2. Kana danga remadziro eimba inoisa zvidhinha ichiumbwa nezvidhinha, rinofanira kumisikidzwa pamwe nemadziro nekoramu panzvimbo yakakwirira yedenga. Zvidhinha zvakatemwa-anti-corrosion matanda zvakavakwa panguva yekuvakwa. Iyo nzvimbo pakati pemadziro ndeye 900 ~ 1200mm. Zvinopfuura matanda maviri ematanda.
3. Isa marudzi ese emapaipi uye emhepo ducts mudenga kuti uone chinzvimbo chemwenje, vents uye akasiyana-siyana akavhurika.
4. Zvese zvinowanikwa.
5. Kumadziro nepasi rakanyorovera basa rekuvaka rinofanira kupedzwa pasirati yekuvhara imba isati yaiswa.
6. Gadza sarupu yekuvaka dhiriji sherufu.
7. Pamberi pekuvakwa kwenzvimbo-huru, chigadziko chesimbi simbi chinofanirwa kushandiswa semuenzaniso kamuri, chiyero chekunamira pachigadziko, kurapwa kwemaitiro evanoti, chivharo uye nzira yekugadzirisa inofanirwa kuedzwa uye kubvumidzwa pamberi pehukuru -area kuvaka.
Nguva yekutumira: Jul-14-2020
Kutarisira kushandira pamwe newe!kubvunza
2020 Kugadzirwa kwakaitwazve